COSATU AND ZCTU SPEAK OUT IN ZIMBABWE ELECTIONS:
As we speak the final results of the recent elections in Zimbabwe still have not been released. perhaps it's because the dictator Robert Mugabwe still has to find a country willing to accept him in exile and some safe place to stash his ill-gotten billions. The following is a joint statement of the Congress of South African Trade Unions and the Zimbabwe Congress of Trade Unions on the matter of these electoral results.
COSATU and ZCTU speak out on Zimbabwe elections
The ZANU-PF is also challenging the results in 16 parliamentary wards, just enough, if they succeed, to reverse the results in their favour and give them a majority of seats. It is speculated that the reason why ZANU PF is so desperate to undermine the will of the majority is that Mugabe intended to resign in six months and make way for Emmerson Mnangagwa, which will be impossible if the ZANU-PF does not have a parliamentary majority.
Labels: international politics, Robert Mugabwe, Zimbabwe